Electrical Test - Shenzhen Anoshamisa Technology Co., Ltd
Kubva pakagadzwa muna 1996, pcb Anoshamisa rave kufunga pamatunhu risanyatsobuda ayo. Somugumisiro, nomumwe nhindi bhodhi inofanira kuongororwa vasati kuridza chaiyo basa vatengi 'muzvirongwa chete kuti pave anotsvedzerera Implementation pamusoro Zvakanyanya Kunaka Panguva Yepamuviri kuita uye mashandiro, iyo yave inokosha link yedu pcb azoshandiswa rikurumidze.
Sezvo kuvandudzika pamusoro zvemagetsi zvemazuva ano uye kuwedzera kuoma zvigadzirwa zvigadzirwa, mazuva kana chete kutarisana rokuongorora ari ukasavimba vaenda kubva kutarisana rokuongorora chete anoshanda tichishandisa zvakanaka miviri rukoko PCBs uye multi-rukoko PCBs asati lamination. Mazuva ano, pamwe pokumuka vias akadai bofu / akavigwa vias, zvakaoma kuti kutarisana rokuongorora kusvika kuti kure.
• Bed pamusoro Nails Testing
Bed wezvipikiri yekuedzwa, anonziwo wakadzikama goko kana yezvisikwa afoot, iri rakatangwa kuburikidza dzakawanda mikukutu yokuedzwa Fixtures sezvakangoita chii zita rayo inorondedzerwa.
• Flying vachiongorora Testing
Flying vachiongorora kunovhenekwa kunoenderana kutamira Yatanga Kuongorora kuedza zvemagetsi chokupika mambure nomumwe pamusoro miti redunhu bhodhi.
Kana mubhedha wezvipikiri kunovhenekwa kana kubhururuka vachiongorora yokuedzwa, asi akaedzwa zvinhu kunyanya kufukidza kubva anovhura, zvikabudura, capacitance kuti kuzvidzivirira mudunhu rimwe nerimwe miti purangazve. Uyezve, dzimwe mishumo zvinogona muchidimbu kuburikidza yokuedzwa zvabuda kusanganisira muchinjikwa chikamu, solderability, svuura simba etc. kuitira kuti akanaka kuita uye mashandiro ose vakashonga mapuranga zvinogona zvachose akaziva yenyu inoshanda mabasa.